IQ Option 2019 ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်: ဤလူကြိုက်များပွဲစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်
IQ Option ပြန်ပို့ခြင်း
အများဆုံးကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစားကဘာလဲ IQ option?
update ကို 24-1-2019: VIP ဆိုတာဘာလဲ IQ Option?
ငါဒါလုပ်ပြီ IQ option ပြန်လည်သုံးသပ် တတ်နိုင်သမျှပြီးပြည့်စုံပြီးလွန်ခဲ့သော3နှစ်များအရမွမ်းမံမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ဆက်ဖတ်နေပြီးသင်ပွဲစားနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
သင်သိလိုလျှင် IQ option ဗျူဟာများ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အစ်မဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် IQoptionwiki.com
Demo အကောင့်ကို Android, IOS နှင့် Pc များအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ သင်တို့မူကား၏အခမဲ့ Demo ပတ်ဝန်းကျင်၌ကုန်သွယ်မှုအနည်းငယ်လုပ်သင့်ပါတယ် IQ option ကိုယ်တိုင်လဲကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုလုံးမှာကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်စတင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အောက်ကျပါကထောက်ပံ့ထားသော virtual ငွေသားကိုအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသို့အရပါလိမ့်မယ်။ အစဦးတွင် "IQ Option Europe Ltd ကိုဥရောပ၌ CySEC ဖြင့်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီး EEA မှခွင့်ပြုသည်။ ဒုတိယမှာ IQ option IQOPTION LTD ဟူသောအမည်အောက်တွင်ဥရောပပြင်ပတွင်လည်ပတ်နေပြီးစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင် (မှတ်ပုံတင်မထား) တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ဒီတော့အားလုံးကကောင်းကောင်းထိန်းညှိထားတဲ့ပွဲစားပါ၊ အဓိကအချက်မှာ၎င်းတို့သည်ယူအက်စ်အေ၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ အစ္စရေး၊ ဆီးရီးယား၊ ဆူဒန်၊ ဂျပန်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မှန်ကန်သောခန့်မှန်းခြင်း (အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှု) တွင်အများဆုံးအမြတ်သည် ၉၂% အထိရှိသည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်အများဆုံးအမြတ်သည် ၉၅% အထိရှိပြီးအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သာလုပ်လိုပါကမှန်ကန်သောခန့်မှန်းခြင်း (အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှု) ဖြစ်လျှင်မှန်ကန်သောခန့်မှန်းမှု ၉၅% အထိရလိမ့်မည်။ သို့သော်စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်သူတို့သည် cryptocurrencies ကိုသာကမ်းလှမ်းသည်။ ပုံသေအချိန်အရောင်းအဝယ်အသစ်များသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပေးချေမှုများကိုပေးပြီး ၉၀၀% အထိတက်နိုင်သည်။
ငါပြန်လာဘို့5ထဲက5ပေးပြီ။ အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုအတွက် ၉၂% အထိရှိသည်။ ၎င်းသည် binary options အတွက်အလွန်မြင့်မားသောအမြတ်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အရောင်းအ ၀ ယ်အသစ်ကအနိုင်ရတဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေမှာအမြတ် ၉၀၀% အမြတ်ရစေတယ်။ ငါပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်အကြောင်းကိုပြောပါလိမ့်မယ်။ * ဟုတ်ပါတယ်၊ အကောင်းဘက်ကရနိုင်သမျှသောအရာများသည်သင်ဘက်ကဆုံးရှုံးနိုင်သည်
ဤသူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါရပ်တွေ osf သင့်ရဲ့ကုန်သွယ် interface ကို left အောက်ခြေမှာအလွယ်တကူဖြစ်ကြသည်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသိုက်အလုပ်ဖြစ်တယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ပဲထိုသေးငယ်တဲ့သိုက်ပမာဏကိုကြိုက်တယ်။ ပြီးတော့ပိုကြီးတဲ့ငွေပမာဏကိုမရင်းနှီးမြှုပ်နှံခင်ခင်ဗျားလည်းငွေကိုတကယ်ထုတ်ယူနိုင်တယ်။
IQ Option ၂၀၁၆ တွင်လက်ငင်းငွေသားထုတ်ယူမှုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အသားတင်ရလဒ်မှာသင်၏ငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးသင်၏ငွေကိုမြန်မြန်ရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေထုတ်ရန်သင်ငွေသွင်းရန်သင်အသုံးပြုသောအကောင့်သို့သာပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင့်အကောင့်သို့ငှလွယ်ကူသည်နှင့် IQ Option e-Wallet၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်ငွေလွှဲခြင်းစသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုလက်ခံသည်။
ကံကောင်းတာကသူတို့ကချက်ချင်းငွေထုတ်ယူတာကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ ဆိုလိုတာကကုန်သည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရကြတယ်။ ကတ်ထဲသို့ချက်ချင်းငွေထုတ်ယူခြင်းသည်ငွေလွှဲခြင်းမဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အရောင်းအဝယ်များနှင့်အရောင်းအဝယ်ပြုခြင်းသည်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ အဓိကတစ်ခုမှာအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုများမှ ၉၀၀% အထိအမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်။ အလားအလာရှိသောရာခိုင်နှုန်းအမြတ်သည်သင်ရွေးချယ်ထားသောသပိတ်စျေးနှုန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အပ်ဒိတ်: ဒီဇင်ဘာလ9၏ 2019 နှင့် မှစ၍ ကုန်သည်များသည်ပြက္ခဒိန်လတွင်3ကော်မရှင်မှငွေထုတ်ယူမှုများရှိလိမ့်မည်။ ပြက္ခဒိန်လသည်ပါးစပ်၏ပထမနေ့မှတွက်ချက်သည်။ တစ်ခုချင်းစီနောက်ဆက်တွဲထုတ်ယူတစ် ဦး ကော်မရှင်အခကြေးငွေခံရကြလိမ့်မည်။
(IQ Option မည်သည့် sign up ကိုဆုကြေးငွေမပူဇော်ပါဘူး ၎င်းသည် CySEC Europe.0 ၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်
ယခုပွဲစားသည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၃၈၀ သန်းကျော်နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များအားတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀.၈ သန်းဖြင့်အရောင်းအဝယ်ကိုကြီးကြပ်သောကြောင့်ဤကြိုးပမ်းမှုများသည်အချည်းနှီးမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဤဖော်ပြချက်အရဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တရားဝင်ကုန်သည်အရေအတွက်ရှိသည်။
အကောင်းဆုံး Binary Options ကိုပွဲစားဥရောပ 2015 - ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့်ဘဏ္Financeာရေးသုံးသပ်ချက်အားဖြင့်
နှင့်အတူဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရသိရသည် IQ Option: "VIP-အကောင့်ကိုသူတို့မရှိတော့ကြောင်းကိုခေါ်နေနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်အချို့အခြေအနေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အဘယ်သူသည်ကုန်သည်တစ်ဦးအလွန်ကန့်သတ်အရေအတွက်သာရရှိနိုင်ပါသည် '' ။
IQ Option သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အရောင်းအဝယ်သည်အတော်အတန်အသစ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါက binary options နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အမြတ်ပိုရစေတယ်။
ကုန်သည်များကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာသတိပေးသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါစတင်သောအခါသူတို့၏နိမ့်ဆုံးအပ်ငွေ၏ $ 10 ၏အားသာချက်ကိုယူ။ , ဒါကြောင့်ချွတ်ပေးဆောင်။ ဒါတွေအားလုံးကမှေးမှိန်နေပြီလို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပေမယ့်အကျိုးအမြတ်ကတော့အံ့သြစရာပဲ။
IQ Options ဟာငါနဲ့အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးပွဲစားတစ်ယောက်ပါ။ ဘာလို့ထင်လဲ? ငါတွေ့ခဲ့သည့်သရုပ်ပြအကောင့်ကငါ့ကိုပွဲစားလုပ်ရန်အကြောင်းပြချက်များစွာပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ငါ့ရဲ့ငွေတွေကိုထုတ်ယူရတာဟာခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်ဒီပွဲစားကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်
အဆိုပါ IQ option ပလက်ဖောင်းအမှန်တကယ်ကုန်သည်များနှင့်အတူလက်-In-လက်အလုပ်လုပ် In-အိမ်သူအိမ်သားပရိုဂရမ်မာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသည်အတိုင်း, IQ option ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးအလွန် exigent ကုန်သည်နှင့်ပိုပြီးအပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကိုဖုံးလွှမ်း။ သင်သည်အဘယ်သို့အများဆုံးမကြာခဏအကြောင်းကိုနားထောင်မည် IQ option သူတို့ဖောက်သည်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာတွေကိုပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုတောင်မပြောနိုင်ဘူး။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Brest နှင့်အတူ j'habite ဂျေ m'appelle Chantal ။ ယူရို ၂၃.၀၀၀ ယူရိုနှင့်ရဲများကပြင်သစ်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ရဲအဖွဲ့၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်ပြင်သစ်ရဲများအပြန်အလှန်စကားပြောမှုများနှင့်ပြင်သစ်ရဲတပ်ဖွဲ့သည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအားကူညီခြင်း ရဲတပ်ဖွဲ့သည်အီးမေးလ်နှင့်စစ်ဆေးရေးမှူး၏ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားစာများအရအရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့်သက်ဆိုင်သောဗဟုသုတအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်မှုဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည်မွန်ဂိုလီးယားပြmeနာကိုဖြေရှင်းရန်အပြည့်အ ၀ ရွေးချယ်သည်။ ။ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးမှူးအီး - အီးမေးလ်များကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်ပရင့်ထုတ်ရန် PDF ဖိုင်ရယူရန် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးသည်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့အကူအညီများကိုပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ရဲများကရဲတပ်ဖွဲ့သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် - CENSURE (ARNAQUE)
ရဲတပ်ဖွဲ့သည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားရဲတပ်ဖွဲ့မှူးများအနေဖြင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ အဝေးမှသွားသောလမ်း၊ paypal၊ သမိုင်းကြောင်းနှင့်သမိုင်းကြောင်း၊ ၀ န်ကြီးဌာန၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ… .. , ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊ escroc et et al escroc et une fois queils seront arrêtés, vous အထူးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အုပ်ချုပ်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ၂၃.၀၀၀ ယူရိုယူရို ၂၃.၀၀၀ ယူရိုပြန်လည်ပေးအပ်မည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏အီးမေးလ်ပို့ရန်ပရင့်ထုတ်ရန် PDF ဖိုင်ရယူရန်
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Brest နှင့်အတူ j'hapite, je m'appelle Chantal ။ ယူရို ၂၃.၀၀၀ ယူရိုနှင့်အခြားဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်ပြင်သစ်ရဲများ၊ ရဲ၊ ဂျဲန်ဒါမီနှင့်အခြားရဲဌာနများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများ
Evie Williams က - ဇူလိုင်လ 23, 2019 @ 12: 34
ဤရွေ့ကားပွဲစားများကယ့်ကိုအားလုံးနီးပါးငါ့အသက်ကိုငွေစု၏အဘို့အကြှနျုပျကိုရှိခဲ့တယ်သူတို့သညျငါ့ကိုတစ်ချိန်ကအလွန်မိနစ်ငွေပမာဏကိုထုတ်ယူဒါပေမဲ့တကယ်ကိုနှင့်အမှန်တကယ်ငါပီပီနီးပါးအရာအားလုံးအဘို့သိမ်းယူခဲ့ကြကုန်အံ့ပေမယ့်ကသေးငယ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့တကယ်ခိုင်မာတဲ့အာမခံခကျြမြားနှငျ့အစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ကျောကိုငါ့ပိုက်ဆံရဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားနေပြီးနောက်, ငါ့ပွဲစားကုမ္ပဏီထံမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဌာနမှတစ်ဆင့်ငါအိမ်တွေကိုသွားပြီးခံစားခဲ့သည်။ ထိုအခါငါကွဲပြားခြားနားသောလူအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း left, ပြီးတော့ငါရိုးသားစွာငါတကယ်သေချာငါမဆိုပိုပြီးပိုက်ဆံချွတ်ဖို့အကြောင်းမဟုတ်ခဲ့ရာတွင်ငါ့အချိန်ယူခဲ့ရသည်, ထို site ပေါ်တွင် admin ရဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဖိုရမ်အပေါ် Binaryoptionassetrecovery (DOT) (COM) အမှတ်မထင် နှင့်အချိန်, ကံကောင်းတာငါ့အဘို့သူတို့အမြတ်အစွန်းအပါအဝင်ငါ၏အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 90% ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သော်လည်းကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲပါ။ အများအားဖြင့်ဒီလိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသင်မူကားအစဉ်အဆက် cryptocurrency အဲဒီမှာဝန်ဆောင်မှုစုံလင်သည် Binaryoptionassetrecovery (DOT) (COM) ကြိုးစားပြီးအပါအဝင်ဤအတုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Scan ကိုမဆိုငွေကိုဆုံးရှုံးပြီးပြီဆိုရင်။
ဤရွေ့ကားပွဲစားများကယ့်ကိုအားလုံးနီးပါးငါ့အသက်ကိုငွေစု၏အဘို့အကြှနျုပျကိုခဲ့ရတယ်, သူတို့သညျငါ့ကိုတစ်ချိန်ကအလွန်မိနစ်ငွေပမာဏကိုထုတ်ယူပါစေပေမယ့်ကသေးငယ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့တကယ်ခိုင်မာတဲ့အာမခံခကျြမြားနဲ့စတင်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုနှင့်အမှန်တကယ်ငါပီပီနီးပါး everyt အဘို့သိမ်းယူခဲ့
ကိတ် Powell - သြဂုတ်လ 7, 2019 @ 05: 29
ကိုယ့်ကိုယ်အားလုံးကိုယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြစဉ်ကိုယ်ကအားလုံးကိုလိမ်လည်မှုကြီးဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသိတယ်ဘယ်တော့မှသူတို့လုပ်နေတာအပေါ်ထားရှိမည်အားလုံးကိုယ့်နောက်ကျောကိုငါ့ရန်ပုံငွေတောင်းသည်အထိပိုပြီးပိုက်ဆံတောင်းဖို့ပဲ, ကိုယ့်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအချို့အထူးသဖြင့်ပွဲစားများအားလုံးကိုငါ့အသက်ကိုငွေစုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြ com အစက် tutanota @ နာလန်ထူကျွမ်းကျင်သူ hacktools ကိုစလှေတျဈတစ်ဘုရားသခင်နှင့်အတူတစ်တှေ့ဆုံရှိသည်ဖို့သာကံကောင်းခဲ့ပါတယ်, ကိုယ့်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရမယ့်အစားပိုပြီးငွေရှာ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူရှိခဲ့
ကိုယ့်ကိုယ်အားလုံးကိုယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြစဉ်ကိုယ်ကအားလုံးကိုလိမ်လည်မှုကြီးဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသိတယ်ဘယ်တော့မှသူတို့လုပ်နေတာအပေါ်ထားရှိမည်အားလုံးကိုယ့်နောက်ကျောကိုငါ့ရန်ပုံငွေတောင်းသည်အထိပိုပြီးပိုက်ဆံတောင်းဖို့ပဲ, ကိုယ့်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအချို့အထူးသဖြင့်ပွဲစားများအားလုံးကိုငါ့အသက်ကိုငွေစုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူရှိခဲ့
cowlers - သြဂုတ်လ 29, 2019 @ 10: 54
ထောက်ခံချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, binaryoptionassetrecovery) (com, နောက်ကျောကိုငါ့ပိုက်ဆံရဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်အားလုံးမဟုတ်ထိုသို့ပေမယ့်အများစု, ကိုယ့်ဒုက္ခထဲကဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်။ ငါ့အဘို့အဘယ်သူမျှမကပိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။
ရာခေလသည်။ Turner - စက်တင်ဘာလ 10, 2019 @ 09: 43
ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါ့အ binary option ကိုပွဲစားအားဖြင့် scammed တယ်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများပြန်ခေါ်ဆိုခများ၏ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်, ငါသတ်သေခဲ့ပါတယ်။ ငါ Geminihacks -.- ရည်ညွှန်းခဲ့သည်မရောက်မှီတိုင်အောင်, com get ငါ့ပိုက်ဆံပြန်, ငါသည်သူတို့မ Glenridge မြို့တော်မှပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပျောက်ဆုံးသွား 120k စုစုပေါင်း recover နိုင်ခဲ့သည်, ထိုသူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင့်အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူလိုအပ်နေပါလျှင်ငါရှိအဆက်အသွယ်အကြံပြုသည်။
ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါ့အ binary option ကိုပွဲစားအားဖြင့် scammed တယ်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများပြန်ခေါ်ဆိုခများ၏ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်, ငါသတ်သေခဲ့ပါတယ်။ ငါ Geminihacks ရည်ညွှန်း -.- com get ငါ့ပိုက်ဆံပြန်, ငါသည်သူတို့မ Glenrid မှပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပျောက်ဆုံးသွား 120k စုစုပေါင်း recover နိုင်ခဲ့ပါတယ်မရောက်မှီတိုင်အောင်,
Велин - စက်တင်ဘာလ 25, 2019 @ 07: 20
Впланеработысброкеромпроблемникаких။ Работаетвсеотлично, результатыменявполнеустраивают။ Ктомуже, работатьснимреальноудобно။
впланеработынетникакихпроблем Работаетвсеотлично, результатыменявполнеустраивают။ အလားတူစွာဖြင့်၊
Anastasiya IQ Option - စက်တင်ဘာလ 30, 2019 @ 15: 24
အမှု၌သင်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင့်အကောင့်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အကူအညီများလိုအပ်ပါတယ်, သင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိဖို့ကြိုဆိုကြသည် support@iqoption.com။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Anastasiya IQ Option - အောက်တိုဘာလ 14, 2019 @ 13: 50
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည်သင်၏ကိုယ်စားကုန်သွယ်မှုမပြုကြောင်းသတိရပါ။ သူတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကတော့အခမဲ့ဖြစ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည် Facebook / Instagram / WhatsApp မှကုန်သည်များနှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။
- ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်း
- ab ကတိပေးig အချိန်တိုအတွင်းအမြတ်အစွန်း
ဤနေရာ၌ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြော်ငြာထားသော“ အထူးကု” များမှာ - masonluis950@gmail.com, lisawilliams9764@gmail.comနှင့် carolynroberts225@gmail.com မင်းကိုဆွဲဆောင်ဖို့ (!) သူများဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်၏အကောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကူအညီမဆိုလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အသင်းသို့ဆက်သွယ်ပါ support@iqoption.com။ ဤသည်မှာတကယ့်အီးမေးလ်ဖြစ်သည် IQ Option ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပညာရှိပါ၊ အခြားသူများကသင့်အားအသုံးချခွင့်မပြုပါနှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ချို Pierce - အောက်တိုဘာလ 19, 2019 @ 08: 37
အခြေခံအားဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အဆင်ပြေသော်လည်းအဆင်ပြေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အထောက်အပံ့သည်အမြဲတမ်းအွန်လိုင်းဖြစ်နေရာ၊ ထိုသို့သောအခြေအနေများကြောင့်၎င်းကိုကောင်းမွန်စွာမြှင့်တင်ရန်အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
Anastasiya IQ Option - အောက်တိုဘာလ 21, 2019 @ 10: 57
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူချစ်စရာကောင်းတဲ့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုအလိုရှိ၏ IQ Option ကြီးစွာသောနေ့!
Anastasiya IQ Option - အောက်တိုဘာလ 24, 2019 @ 13: 59
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဂရက်ဂိုရီ၊ မင်းရဲ့ထောက်ခံမှုတစ်လျှောက်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံရရှိစေရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။ 🙂
Grant Edgar - အောက်တိုဘာလ 25, 2019 @ 08: 57
ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာကုန်သွယ်ခဲ့ကြပြီ, ယခုငါ Expertoption ကိုပြောင်းလဲနှင့်ငါနောင်တမရ, သင်အလွန်ကောင်းသောငွေရှာနိုင်ပါတယ်
မိုက်ကယ် - အောက်တိုဘာလ 26, 2019 @ 13: 34
Anastasiya IQ Option - အောက်တိုဘာလ 29, 2019 @ 10: 15
IQ Option အသင်းအဖွဲ့
ချားလ်စ် - နိုဝင်ဘာလ 4, 2019 @ 16: 13
အရောင်းအ ၀ ယ်ကောင်းများသည် expertoption trading သို့သွားသည်။ များစွာသောပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာတော့အရာအားလုံးဟာသိပ်ကိုစိတ်ချရပြီးအမြတ်အစွန်းရပါတယ်
Randall ရစ်ချတ် - နိုဝင်ဘာလ 7, 2019 @ 11: 02
ဂျုံးစ်ဘလဲ - နိုဝင်ဘာလ 8, 2019 @ 16: 51
မကြာသေးမီက Expertoption တွင်ပထမဆုံးငွေပေးချေမှုကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကုမ္ပဏီ၏အကောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြာမြင့်စွာကတည်းကသံသယဝင်ခဲ့သော်လည်းယခုအခြေအနေများကအပြောင်းအလဲမြန်သည်။
Anastasiya IQ Option - နိုဝင်ဘာလ 13, 2019 @ 10: 46
ချစ်ခင်ရပါသောချားလ်စ်၊ သင်၏ထောက်ခံအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေ
Anastasiya IQ Option - နိုဝင်ဘာလ 13, 2019 @ 10: 47
သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ချစ်လှစွာသော Randall! ကျေးဇူးပြု၍5ကြယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်ကိုသိပါစေ။
Anastasiya IQ Option - နိုဝင်ဘာလ 13, 2019 @ 10: 48
သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပါလိမ့်မယ် IQ Option?
ဟင်နရီဂျော်ဒန် - နိုဝင်ဘာလ 13, 2019 @ 14: 46
ထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သောပလက်ဖောင်း Expertoption တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ကျွန်ုပ်ဤတွင်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းအတွက်ဝမ်းသာပါသည်။
Neal Silvester - နိုဝင်ဘာလ 17, 2019 @ 09: 17
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကုန်သွယ်ရေးဟာ Expertoption ကဲ့သို့သောအဆင်ပြေတဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာသဘောကျတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပွဲစားကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး
Girard Florentin - နိုဝင်ဘာလ 17, 2019 @ 09: 59
Desjardins Olivier - နိုဝင်ဘာလ 18, 2019 @ 17: 14
ဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မှာ Expertoption ကုန်သွယ်ရေးမှာဘာပြသနာမှမရှိဘူး၊ ကောင်းမွန်တဲ့ယောက်ျားတွေ၊ အထူးသဖြင့်အထောက်အပံ့တွေကအမြဲတမ်းအကူအညီပေးလိမ့်မယ်၊ ဒါ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယေရှဲ - နိုဝင်ဘာလ 21, 2019 @ 17: 07
ကျွန်ုပ်သည် expertoption တွင်စတုတ္ထမြောက်ငွေပေးချေမှုကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာယခုအမြတ်အစွန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်သွယ်မှုကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဆက်လုပ်ရန်
Anastasiya IQ Option - နိုဝင်ဘာလ 22, 2019 @ 09: 17
ယေရှဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏အကြောင်းကြားစာကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားလိုပါသည် IQ Option အဖြစ်ကောင်းစွာကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သောကြာနေ့ညပါ 🙂
Franklin - နိုဝင်ဘာလ 25, 2019 @ 07: 45
ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့အရောင်းအ ၀ ယ်တွေထဲမှာအတည်ငြိမ်ဆုံးကတော့ expertoption ပါ။ နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်
သောမတ်စ်ဘရိုင်ယန် - နိုဝင်ဘာလ 25, 2019 @ 08: 18
ငါ Expertoption site ကိုမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါပြီ။ အမြတ်သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ မူအရဤရှုထောင့်၌အရာအားလုံးသည်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။ နိဂုံးနှင့်အညီပြproblemsနာမရှိပါ၊
Quinn Mark - နိုဝင်ဘာလ 27, 2019 @ 07: 53
ငါ Expertoption ကို 2019 တစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်မှုလို့ယူဆတယ်၊ ဒါကပလက်ဖောင်းတော်တော်များများမှာအလုပ်လုပ်တယ်။
စတီဗင် - နိုဝင်ဘာလ 28, 2019 @ 19: 32
လီယို - နိုဝင်ဘာလ 29, 2019 @ 08: 07
မနေ့က Expertoption အတွက်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီး၊ ငါပေါင်းမှထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါကအမြဲတမ်းအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာငါကစုသိမ်း၊ ထုတ်ယူခဲ့တယ်၊ ငါဒီမှာဆက်လုပ်နေမှာပါ၊
Anastasiya IQ Option - နိုဝင်ဘာလ 30, 2019 @ 13: 30
Marcus - ဒီဇင်ဘာလ 1, 2019 @ 08: 56
ကျနော့်အမြင်တွင်, အလုပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒီကယ့်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Anastasiya IQ Option - ဒီဇင်ဘာလ 1, 2019 @ 13: 40
သင့်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်ချက်များအတွက်, Marcus, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူချစ်စရာကောင်းတဲ့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုအလိုရှိ၏ IQ Option ကြီးစွာသောနေ့!
ရစ်ချက် - ဒီဇင်ဘာလ 2, 2019 @ 15: 44
ငါ Expertoption ပလက်ဖောင်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းငွေပေးချေမှုတစ်ခုမျှမပျောက်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာဤ platform ပေါ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရောဘတ်ဂျိမ်းစ် - ဒီဇင်ဘာလ 2, 2019 @ 16: 31
ငါထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာတစ် ဦး ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကြာရှည်ခံနိုင်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ပေမယ့် Expertoption ကတကယ်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ကုန်သွယ်မှုမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုပြသခဲ့တယ်။
ခရစ် - ဒီဇင်ဘာလ 3, 2019 @ 14: 19
Anastasiya IQ Option - ဒီဇင်ဘာလ 4, 2019 @ 12: 27
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခရစ်။ သင့်မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 🙂
ဂါဗြေလ - ဒီဇင်ဘာလ 4, 2019 @ 18: 00
ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်, ငါကြိုက်တတ်တဲ့ Expert Option ပွဲစား။
Randolph Ethan - ဒီဇင်ဘာလ 5, 2019 @ 09: 54
जोकोईभीऐसाकहताहै, लेकिनऑनलाइनपैसाबनानेकेलिएएक्सक्लूज़नएकबढ़ियाविकल्पहै, केवलयहहैकिआपकोट्रेडिंगकोसमझनेकीआवश्यकताहै
जोकोईभीऐसाकहताहै, लेकिनऑनलाइनपैसाबनानेकेलिएएक्सक्लूज़नएकबढ़ियाविकल्पहै, केवलयहहै
ရောဘတ် - ဒီဇင်ဘာလ 5, 2019 @ 10: 34
Anastasiya IQ Option - ဒီဇင်ဘာလ 7, 2019 @ 12: 26
Randolph ရဲ့ကြင်နာတဲ့မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှင့်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်မှု IQ Option! 🙂
Anastasiya IQ Option - ဒီဇင်ဘာလ 7, 2019 @ 12: 27
ငါတို့သည်သင်တို့ app ကိုပျော်မွေ့ကြသည်, ချစ်လှစွာသောရောဘတ်။ မင်းအတွက်ငါတို့လုပ်ပေးနိုင်တာတစ်ခုခုရှိရင်ငါတို့ကိုအသိပေးပါ support@iqoption.com!
သောမတ်စ် - ဒီဇင်ဘာလ 9, 2019 @ 08: 53
အရောင်းအ ၀ ယ်မှရရှိသောအမြတ်သည် Expertoption အတွက်ကောင်းသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ကောင်းမွန်သော ၀ င်ငွေကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်ကြိုးစားရန်အကြံပြုပါသည်။
တိတ် Clyde - ဒီဇင်ဘာလ 11, 2019 @ 15: 40
Anastasiya IQ Option - ဒီဇင်ဘာလ 12, 2019 @ 12: 58
तअननततअीप्रदप्रप्रप्रप्रप्रतप्रप्रप्रतप्रतततनप्रतअअ ငါသည်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်၌အပ်နှံသည်အတိုင်း၊ 🙂
Anastasiya IQ Option - ဒီဇင်ဘာလ 12, 2019 @ 12: 59
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်သင်၏ကိုယ်စားကုန်သွယ်မှုမပြုလုပ်ရန်သင့်အားသတိပေးလိုပါသည်။ သူတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကတော့အခမဲ့ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည် Facebook / Instagram / WhatsApp / Telegram မှကုန်သည်များနှင့်ကုန်သည်များနှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်ပွဲစားကိုမဆိုဆိုလိုသည်။
- ab ကတိပေးig အချိန်တိုအတွင်းအမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်သင်၏ရန်ပုံငွေပြန်လည်နာလန်ထူ
ကျေးဇူးပြု၍ ပညာရှိပါ၊ အခြားသူများကသင့်အားအသုံးချခွင့်မပြုပါနှင့်။ ဒီလူတွေကမင်းကိုဆွဲဆောင်ဖို့ပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကူညီရန်စိတ်အားထက်သန်ပါသည်၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ရိုက်ချက်တင် / ခေါ်ဆိုမှုများတွင်အမြဲပါဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုအသေးစိတ်ကျသောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထံကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရောက်ရှိနိုင်မည်နည်း https://www.investingstockonline.com/visit-iqoption။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယနေ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့နေပါ
Anastasiya IQ Option - ဒီဇင်ဘာလ 15, 2019 @ 15: 13
နယူးဇီလန်ကတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့သူငယ်ချင်းမစ္စတာဘာရီ (သို့) တခြား“ ကျွမ်းကျင်သူ” တွေနဲ့မဆက်သွယ်ပါနဲ့။
သင်၏အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် / အချိန်တိုအတွင်းကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းရရှိရန် / သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုပြန်လည်ရယူရန်ကတိပေးသောမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်ကိုဤနေရာတွင်အမြဲတမ်းသတိပေးမည်
ယောက်ျားများ၊ ပညာရှိပါ။ သင်ကြိုးစားပြီးသောငွေကိုအခြားသူများအားမသိမ်းယူပါနှင့်။
သင်၏အကောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကူအညီမဆိုလိုအပ်ပါက IQ Option, မှာထောက်ခံမှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည် support@iqoption.com.
သတိရပါ၊ ကုန်သွယ်မှုသည်အရင်းအနှီးဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေစဉ်အပြည့်အဝသတိထားပါ။
ဝုဒ်ချားလ်စ် - ဒီဇင်ဘာလ 16, 2019 @ 18: 49
တကယ်တော့ expertoption ပလက်ဖောင်းဟာမျှော်လင့်ထားတာအားလုံးထက်ကျော်လွန်ခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်ပေးရတဲ့ငွေတွေနဲ့ငါတို့အထူးအံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်
ယောဟနျသ - ဒီဇင်ဘာလ 17, 2019 @ 07: 46
အလက်ဇန်းဒါး - ဒီဇင်ဘာလ 19, 2019 @ 08: 26
Expertoption သည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလူသစ်ဖြစ်ပေမယ့်ဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုထောက်ပံ့မှုသဘောထားကိုသဘောကျတယ်
Anastasiya IQ Option - ဒီဇင်ဘာလ 19, 2019 @ 10: 10
Tyler - ဒီဇင်ဘာလ 21, 2019 @ 16: 31
Flynn ကက်နက် - ဒီဇင်ဘာလ 25, 2019 @ 08: 45
ငါနှင့်ကုန်သွယ်ရေးသည် Expertoption ထက်သာလွန်သည်။ သင်ယခုရှာမတွေ့ပါ၊ သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်နှင့်အငြင်းပွားနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်မလုပ်ဘဲသင်ကိုယ်တိုင်အားလုံးကိုနားလည်လိမ့်မည်
Mahesh - ဒီဇင်ဘာလ 29, 2019 @ 00: 40
ထိုကဲ့သို့သောပွဲစားများနှင့်ကုန်သွယ်ရာတွင်အလွန်ဂရုစိုက်သည်။ အကယ်၍ သင်ဒဏ်ငွေရလိုလျှင်သူတို့နှင့်ဘယ်တော့မျှကုန်သွယ်မည်မဟုတ်ပါ။
ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးခြင်း၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်ကျွန်ုပ်အား ၄၅၀ ဒေါ်လာဆုံးရှုံးခဲ့သည်
ထိုကဲ့သို့သောပွဲစားများနှင့်ကုန်သွယ်ရာတွင်အလွန်သတိရှိရှိဖြင့် ၀ င်လုပ်လိုပါကမည်သည့်အခါကမျှကုန်သွယ်ခြင်းမပြုပါနှင့်
Potter အာမုတ် - ဇန်နဝါရီလ 3, 2020 @ 11: 31
Expertoption အရောင်းအ ၀ ယ်ဟာဈေးကွက်ထဲမှာတည်ငြိမ်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သူတို့နဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကြာနေခဲ့ပြီးဒီရှည်လျားတဲ့လိုင်းအတွက်ပြproblemsနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ဘူး။
Dawson Percival - ဇန်နဝါရီလ 3, 2020 @ 12: 07
က Norton - ဇန်နဝါရီလ 6, 2020 @ 14: 23
Expertoption သည်အရောင်းအ ၀ ယ်မှအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထောက်ပံ့သူနှင့်မန်နေဂျာများကသူတို့အလုပ်တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ကြသောကြောင့်၊
Potter Godwin - ဇန်နဝါရီလ 8, 2020 @ 08: 56
တစ်ဆယ် - 1 =
အမျိုးအစား:	ဒစ်ဂျစ်တယ် option ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Created:	ဇန်နဝါရီလ 20, 2019
MarketsWorld ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - US အတွက်အကောင်းဆုံး binary options?
XM ပြန်လည်သုံးသပ် - သင်ဤကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သလဲ
Ayrex ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - လိမ်လည်မှုလောသို့မဟုတ်တရားဝင်ဒွိစုံရွေးစရာပွဲစားများလား။
Finmax: ယုံကြည်စိတ်ချရသော Binary Options Broker? - ၂၀၂၀ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ